i-pCloud Drayivu: insiza yokugcina ifu yesikhulumi | Kusuka kuLinux
Okuhle | 23/12/2021 06:15 | Kubuyekezwe ku- 23/12/2021 23:40 | Aplicaciones
Isitoreji samafu siguqukile siyigcina kanjani imininingwane yethu ebalulekile y kunezinkampani eziningi ezinikeza lobu buchwepheshe.
Ngenxa yesitoreji samafu, inani elikhulu lamadokhumenti lingagcinwa, izithombe, amavidiyo noma izingoma, ngaphandle kokusebenzisa sonke isikhala esikukhompyutha yakho noma iselula.
Ungangena futhi wabelane ngamafayela akho, ngaphandle kokuthembela kumaCD, amadrayivu angaphandle, noma ezinye izinketho zokugcina ngokomzimba.
Yingakho kulokhu sizokhuluma ngenkonzo yokugcina ifu.
1 Mayelana ne-pCloud Drive
2 Ungayithola kanjani i-akhawunti yamahhala ku-pCloud Drive?
3 Ungayifaka kanjani i-pCloud Drive kuLinux?
Mayelana ne-pCloud Drive
ICloud Cloud iyisevisi yokugcina amafu abasebenzi be-cross-platform abangafinyeleleka nganoma yisiphi isiphequluli sewebhu. Isebenzisa i-RSA 4096-bit yemboni ejwayelekile okhiye abazimele yabasebenzisi kanye nama-AES angama-256-bit okhiye befayela ngalinye nefolda ngayinye.
Njengamanye amasevisi wokugcina amafu athandwayo, i-pCloud Drive them ikuvumela ukuthi uthumele amafayela amakhulu ngesixhumanisi sokulanda, kanye nokwamukela amafayela endaweni yakho yokugcina amafu usebenzisa izixhumanisi zokulayisha.
Futhi bangabelana ngamafolda abo nabanye njengoba kudingeka futhi unikeze izinhlobo ezahlukahlukene zezimvume zokufinyelela.
Nganoma yisiphi isikhathi ungabona ukuthi wabelana nobani nokuthi wabelana nobani ngethebhu "Yezenzo" kuklayenti ledeskithophu noma "ngamafolda abiwe" kuhlelo lokusebenza leselula.
I-PCloud isebenzisa ukubethela kwe-TLS / SSL ukuvikela amafayela akho lapho edluliswa kusuka kukhompyutha yakho kuya kumaseva akho.
Amafayela agcinwa ezindaweni ezahlukahlukene kumaseva endaweni yokugcina idatha ephephe kakhulu.
Esinye sezizathu sokuthi i-pCloud ingaba yindlela engcono kuneDropbox ukuphepha okuhle ekunikezayo.
Ugxile ekubetheni nasekuphepheni, i-pCloud inikeza u-10 GB wesitoreji samahhala kwirekhodi ngalinye. Ungakhuphula okungaphezulu kokufika ku-20 GB, ukumema abangani, ukwabelana ngezixhumanisi kumanethiwekhi omphakathi, njll.
Inazo zonke izici ezijwayelekile zensizakalo yamafunjengokuhlanganyela kwefayela nokuvumelanisa, ukuvumelanisa okukhethiwe njll. pCloud futhi inamakhasimende endabuko kuwo wonke amapulatifomu, kufaka phakathi iLinux, kunjalo.
Ungayithola kanjani i-akhawunti yamahhala ku-pCloud Drive?
Ngaphambi kokudlulela kunqubo yokufaka yomlawuli wesicelo, kuyadingeka ukuthi sibe ne-akhawunti yesevisi ukuze sikwazi ukuyisebenzisa, singakwenza lokhu kusuka isixhumanisi esilandelayo.
Ngokudala i-akhawunti yethu ngokushesha sizothola i-10 GB yesitoreji samahhala. Kusuka kuwebhu singathola i-GB eyengeziwe, esingathola kuyo u-4 owengeziwe ngokulandela izinyathelo ezikhonjisiwe.
Okungukuqinisekisa ikheli lethu le-imeyili, faka ifayela efwini lethu bese ufaka umphathi ku-PC yakho nakwiselula yakho.
Ungayifaka kanjani i-pCloud Drive kuLinux?
Uma ufuna ukufaka le nsizakalo yokugcina amafu, singakwenza ngokulandela imiyalo esabelana ngayo ngezansi.
Okokuqala kumele siye kuwebhusayithi esemthethweni ye-pCloud Drive futhi esigabeni sayo sokulanda singathola umphathi wohlelo lweLinux. Isixhumanisi yilokhu.
Ngaphakathi nikeza ifayela ngefomethi ye-AppImage okufanele sinikeze izimvume zokwenza esingazenza ngomyalo olandelayo:
Kwenziwe lokhu singasebenzisa imenenja ye-pCloud Drive kusistimu ngokuchofoza kabili kufayela elilandiwe noma ngendlela efanayo esingayenza kusuka esigungwini ngokwenza umyalo olandelayo:
Uma lokhu sekwenziwe, umlawuli uzobe evulekile ohlelweni.
Vula lo mphathi wohlelo lokusebenza izosicela ukuthi singene kule nsizakalo ngemininingwane yethu yokufinyelela.
Futhi ngomumo ngalokhu sizobe sisebenzise i-disk ebonakalayo lokho kusinikeza insizakalo yokuthi sikwazi ukuphatha amafayela ethu efwini futhi sikwazi ukufinyelela kuwo kusuka kunoma iyiphi idivayisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-pCloud Drayivu: insizakalo yokugcina ifu yesikhulumi
UDaniel L kusho
Bengilokhu ngiyisebenzisa iminyaka eminingana. Ingenye yezinsizakalo ezinhle kakhulu zamafu ezikhona kuze kube manje; ukuvumelanisa kuwo wonke amadivayisi kuhle kakhulu. Kunconywe u-100%.
Phendula uDaniel L
Yebo, inkinga enkulu nge-pCloud ukuthi akuyona "umthombo ovulekile"….
Ingifinyelela kuphela kufika ku-10Gb futhi ngenze konke ekushoyo, faka uhlelo lokusebenza, uhlelo lwedeskithophu, layisha amafayela, vumelanisa, njll.
Ukhona owaziyo ukuthi ungafika kanjani ku-20 Gb?
Okwamanje ama-akhawunti amahhala afinyelela ku-10GB KUPHELA. Uma ufuna isikhala esengeziwe, kuzodingeka uqashe uhlelo lokukhokha. Akusekho.
Impendulo ivela ku- Llonson
I-S6-rc, imenenja yesevisi efana ne-sysv-rc ne-OpenRC
I-DuckDuckGo isivele isebenza ngesiphequluli sayo sewebhu sedeskithophu